Ulapha: Ekhaya1 / Ngathi
Shandong TSINFA CNC Equipment Co., Ltd. yasekwa ngo-2000, imveliso yokuqala yokugaya oomatshini benkampani yokuqala iimveliso, kuphuhliso lwezinto ezintsha eziqhubekayo, ngophando oluzimeleyo kunye nemveliso yophuhliso, ukusebenza kwegama kunye nezinye iindlela zokwandisa umgca wemveliso . Iimveliso zigubungela ukusika kwesinyithi kunye nesinyithi ukwenza iintlobo ezimbini, ukuchaneka kwe-CNC ye-cylindrical grinder, ubuso be-cylindrical grinder, i-CNC lathe, i-cnc iziko le-axis machining machining, i-axis ye-CNC yomshini wokugaya, umatshini, ukubhola umshini wokugaya, ukucinezela ngesanti kubunzulu baphantsi. Iimveliso zithengiswa ngokubanzi kwiimarike zasekhaya nakwamanye amazwe.
Kule minyaka idlulileyo, inkampani ijolise kwimveliso ephezulu kunye nokuthengiswa kwezixhobo zomatshini ze-CNC, oomatshini kunye noyilo lwezixhobo kunye nophuhliso. Kuphuhliswe uthotho lwe-TFA lokugaya imoto kunye nokucofa iziko lokujika elihlanganisiweyo, uthotho lwe-BK yeebhedi ezine ze-axis ze-CNC, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi zokwenza ngokufanelekileyo. Ixabiso lethu kunye nenjongo yethu kukuyila iindleko zokusebenzisa kakuhle kubasebenzisi kunye nabathengi, ukuphucula imveliso kunye nexabiso lamashishini kuyilo kunye nenkonzo yokuyila.
Iinkampani zihambelana nokuthembeka komgangatho, ukuqinisekisa ukuba isixhobo ngasinye sikulungele ukusebenza kumzi-mveliso, ukuqinisekisa ukuba banokwenza konke okusemandleni abo kubasebenzi nakubathengi.
Sinokubonelela ngezixhobo zomatshini kubandakanya:
Umatshini wokwenza isinyithi
Band Sawing umatshini
IZiko leMachining ye-CNC,
CNC nkqo Lathe,
Radial ukubhola Machine,
IZiko leMachining Gantry,
Machine Milling Universal njalo njalo.
Amava ukuqokelela iminyaka emininzi kangaka kunye nokukhula, sele sibe ngumthengisi oqolileyo wezixhobo zomatshini kunye nezisombululo kubathengi bethu, umgangatho uphuculwe ngokuqhubekekayo, iikhonsepthi zoyilo kunye nobuchwephesha bokulungiswa kuphuculwe nako.
Ngokwandiswa kwesikali semveliso, siphuhlisile okanye sathenga izixhobo ezininzi zokuchaneka kubandakanya umatshini wokugaya / wokukruqula umatshini, isixhobo sokugaya esiphakamileyo, umatshini wokugaya wentloko esithoba njalo njalo, ngelixa sihlangabezana neemfuno zethu, ukusebenza kwemveliso kwandisiwe.
Isetyenziswa kumgangatho omkhulu wokugaya / umatshini wokudina, kusenza sikwazi ukuvelisa i-CNC ethe nkqo kunye nomatshini omkhulu wokugaya.
Esikhulu-kwinqanaba eliphezulu isikhokelo kaloliwe umatshini wokugaya usetyenziselwa ukugaya uloliwe isikhokelo somgaqo wesitimela, gcina ukuchaneka okuphezulu.
Isetyenziswe kumatshini wokugaya intloko esithoba, iphucula ukusebenza kwemveliso yebhedi ethe tyaba kakhulu, kanye xa ityibilikayo, emva komatshini omkhulu wokugaya kaloliwe wokugqiba umatshini.
Umatshini okhethekileyo wokuqhubekeka kwebhokisi yentloko ye-lathe, yenza ibhokisi yentloko yakhiwe kanye ngexesha, ukusebenza kakuhle kwemveliso kuye kwanda kakhulu.
Sityalile imali eninzi ukuthenga izixhobo ezikumgangatho wehlabathi zokuhlola, ezinje ngengalo yokulinganisa, ibhalansi eguqukayo, iRenishaw laser interferometer, njl., Qiniseka ukuba isixhobo ngasinye somatshini sihlolwa ngokungqongqo.